devops iziseko kunye neengcinga
Eyona bash Iziseko zeDevOps kunye neeConcepts
Kule posi, siza kugubungela iziseko, iikhonsepthi kunye nezenzo ezibalulekileyo kuye nabani na osebenza kwindawo ye-DevOps.
Siza kubandakanya oku kulandelayo:
Inkcubeko Inkcubeko yentsebenziswano phakathi kwe-Dev kunye ne-Ops
Ukuziqhelanisa - Iindlela ezixhasa iinjongo zenkcubeko ye-DevOps
Izixhobo -Izixhobo ezinceda ukumilisela iinkqubo ze-DevOps
Ilifu Ubudlelwane obusondeleyo phakathi kwe-DevOps kunye nelifu
I-DevOps = Dev (Uphuhliso) + Ops (UkuSebenza)
Le nkcazo ivela kwiWikipedia yindawo elungileyo yokuqala:
'I-DevOps yinkcubeko yobunjineli yesoftware kunye nokwenza okujolise ekudibaniseni uphuhliso lwesoftware (i-Dev) kunye nokusebenza kwesoftware (i-Ops)… I-DevOps ijolise kwimijikelezo emifutshane yophuhliso, ukwanda kokuhanjiswa kwexesha, ukukhutshwa okuthembekileyo ngakumbi, kulungelelwaniso olusondeleyo neenjongo zeshishini.'
I-DevOps kuqala yiNkcubeko yentsebenziswano phakathi kwabaphuhlisi kunye nokusebenza kwabantu
Le nkcubeko inike iseti yeZenzo
I-DevOps yindlela yokusebenza
I-DevOps yintshukumo, ngabasebenzi, yeengcali
I-DevOps ayisoseti yezixhobo, kodwa izixhobo zibalulekile kwimpumelelo kwi-DevOps
I-DevOps ASIYO mgangatho
I-DevOps ASIYO isihloko somsebenzi
Inkcubeko ye-DevOps imalunga intsebenziswano phakathi kwe-Dev kunye ne-Ops. Ngokwesiko, bobabini basebenze ngokwahlukeneyo kwaye babenabo eyahlukileyo kwaye ochasayo iinjongo.
Ngaphantsi kwenkcubeko ye-DevOps, i-Dev kunye ne-Ops basebenza kunye kwaye babelane nge injongo enye . Oko kukhathalelo malunga nozinzo kunye nesantya, kunye ne-ops ukukhathalela isantya kunye nozinzo.
Iindima zesiko zabaphuhlisi kunye neenjineli ezisebenzayo ziye zaphazamiseka phantsi kwe-DevOps.
Endaweni yokuba 'uphonsa ikhowudi eludongeni,' i-dev kunye nee-ops zisebenza kunye ukwenza kunye nokusebenzisa izixhobo kunye neenkqubo ezixhasa isantya kunye nozinzo.
IDev neOps zidlala kwiqela elinye
I-Dev kunye ne-Ops zabelana ngeenjongo ezifanayo
Ixesha elikhawulezayo lokuthengisa (TTM)
Zimbalwa iintsilelo zemveliso
Ukufumana kwangoko ukusilela
Yintoni eyayingalunganga ngeesilos zemveli?
Ngaphantsi kwesilos zemveli:
Ii-Devs zibhala ikhowudi ethile
'Yiphose phezu kodonga' kwiQA
Ikhowudi ibuyisa ngapha nangapha phakathi kwe-Dev kunye ne-QA njengoko i-QA ifumanisa iingxaki kwaye ii-Dev ziyazilungisa
Okokugqibela, ilungele ukuveliswa
I-QA / Dev 'iphosa ikhowudi eludongeni' kwiMisebenzi
Ukuba kukho ingxaki, i-Ops iyiphosa emva kodonga kwi-Dev
I-domain yeqela ngalinye 'yibhokisi emnyama' kwamanye amaqela
U-Ops wayedla ngokuthi: “Iinkqubo zethu zilungile; yikhowudi yakho! ”
UDev wayeza kuthi: “Kodwa le khowudi isebenza kumatshini wam!”
Le ndlela yokusebenza ikhokelela ekunikezelweni kweminwe emininzi - i-Ops ukuba yibhokisi emnyama, i-Devs ayizithembi kwaye ii-Ops azizithembi i-Devs.
I-Dev kunye ne-Ops banezinto eziphambili ngokubaluleka- I-Ops ijonga ii-Devs njengokuqhekeka kozinzo kunye nee-Devs zibona ii-ops njengomqobo ekuhambiseni ikhowudi.
Nokuba Bafuna ukusebenza kunye -I-Dev ilinganiswa ngokuhambisa amanqaku, oko kuthetha ukuba ukuhambisa utshintsho kunye ne-Ops kulinganiswa ngexesha, kodwa utshintsho alulunganga kuzinzo.
Ukwehla kweSilos zemveli
'Iibhokisi ezimnyama' zikhokelela ekukhombiseni ngeminwe
Inkqubo ende ithetha ukuba kuthathe ixesha ukuya kwintengiso
Ukunqongophala kwezinto ezizenzekelayo kuthetha ukuba izinto ezinje ngokwakha kunye nokusasazwa akuhambelani
Kuthatha ixesha elide ukuchonga nokulungisa iingxaki
Ukudibanisa i-Dev kunye ne-Ops (DevOps)
Ngaba i-DevOps izilungisa njani iingxaki zesilos zemveli?
Ngaphantsi kwemodeli ye-DevOps:
Idilesi yokubhala ikhowudi
Ikhowudi ukuzibophelela kudala ukwakhiwa okuzenzekelayo, ukudityaniswa, kunye neemvavanyo
I-QA inokufumana izandla kuyo phantse kwangoko
Nje ukuba ilungile, qalisa ukuthunyelwa okuzenzekelayo kwimveliso
Kuba yonke into izenzekelayo, kulula kakhulu ukuhambisa ngelixa kugcinwa izinto zizinzile
Ukuhanjiswa kunokubakho rhoqo ngakumbi, ukufumana amanqaku ezandleni zabathengi ngokukhawuleza
Ukuba ukuthunyelwa kwakutshanje kwaphula into kwimveliso, ukubeka esweni okuzenzekelayo kukwazisa iqela ngokukhawuleza
Iqela lenza ukubuyela umva ngokuthumela ingxelo yangaphambili yokusebenza, ukulungisa ingxaki ngokukhawuleza
Emva kweyure, iqela le-dev liyakwazi ukuhambisa ingxelo echanekileyo yekhowudi entsha
I-Dev kunye ne-Ops basebenze kunye ukubeka phambili isantya sokuhanjiswa kunye nozinzo.
Ukuzenzekelayo kukhokelele kungqinelwano- Ukwakha, ukuvavanya, kunye nokuhambisa kwenzeka ngendlela efanayo ngalo lonke ixesha, ngokukhawuleza nangakumbi rhoqo
Ukubeka iliso ngokufanelekileyo, kunye nenkqubo yokuhambisa ngokukhawuleza, kuqinisekisiwe ukuba iingxaki zinokulungiswa nangaphambi kokuba abasebenzisi baziqaphele. Nangona utshintsho lwekhowudi lubangele ingxaki, abasebenzisi bafumana kancinci okanye akukho xesha lokuphumla.
Amaqela ezobuchwephesha athanda ukonwaba ngokwenza i-DevOps kunokuba phantsi kwesilos zemveli
Ixesha elininzi lokuvuselela kunye nexesha elincinci lokucima imililo
Ii-Devs kunye nee-Ops zombini zabelana ngeenjongo ezifanayo nesantya sonikezelo kunye nenkqubo ezinzileyo.
Indlela yokusebenza ye-DevOps inika abathengi izinto abazifunayo ngokukhawuleza nangokuthembekileyo.
amatyala ovavanyo kwinqwelo othengela kuyo
Ukuphela kuka-2018, iMicrosoft, hayi iApple, yeyona nkampani ibaluleke kakhulu kwihlabathi
Ekugqibeleni! U-Apple ekugqibeleni ufumana ixesha lokuGcina iMini ngokuchanekileyo
Uyikhulula njani indawo yokugcina kwi-iPhone